Hi Broadband Internet Service Provider
09 455 3000 77/88/99
သွားသွားလာလာ Hi WiFi
လူကြီးမင်းသည် အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားသွားလာနေရသောသူဖြစ်ပြီး အပြင်မှာ သွားလာရင်းနှင့်ပင် အိမ်မှာအသုံးပြုနေသလို Mobile Games များ TV Show များကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု အသုံးပြုလိုသောသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါ သလား၊ Shopping Center များ၊ ဆေးရုံ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့် လူကြီးမင်း နေ့စဉ်အများဆုံးသွားရောက်လေ့ရှိသည့် Hi Wi-Fi Service ရရှိနိုင်သော နေရာများတွင် Hi Wi-Fi ၏ “ သွားသွား လာလာ Hi Wi-Fi ” Plan ကို အသုံးပြုကာ မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက် နှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်း အနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ Hi Wi-Fi Prepaid Cards များကို အမြန်ဆုံး ဝယ်ယူပြီး ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လိုင်းအားကောင်းမွန် မြန်ဆန်သော အင်တာနက်ကို စတင် တွေ့ကြုံ ခံစားလိုက်ပါ…..
လုပ်ငန်းသုံးနှင့် မိသားစုသုံး Broadband Internet
မြန်နှုန်းမြင့် လိုင်းအားကောင်းမွန်သော အင်တာနက် Service လိုအပ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် မိသားစုနေအိမ်များ အတွက် သီးသန့် ပြင်ဆင်ပြုလုပ်ထားသော Dedicated Broadband Package နှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျာ၊ Hi Broadband Pakage များမှာ 10 Mbps မှ 100 Mbps အထိ အမျိုးမျိုး ရှိသောကြောင့် လူကြီးမင်းအသုံးပြုနိုင်သော ငွေအင်အား၊ လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့် ရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုးကို လူကြီးမင်းစိတ်တိုင်း ကျ ရွေးချယ်အသုံးပြု ရရှိနိုင်ပါသည်၊ Dedicated Team နှင့်အတူ အမြင့်မားဆုံးသော မြန်နှုန်းရှိသည့် Fibre နည်းပညာ၏ စွမ်းဆောင်မှုကြောင့် စိတ် အေးချမ်းသာစွာဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏လုပ်ငန်းများ ပိုမိုကြီးထွားဖွံ့ဖြိုး အောင် မြင်လာစေရန် လိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များအား အပြည့်အဝအာရုံစိုက်ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်…
AS peering service
Facility Providing (Colocation)
VAS on ip network (Advertising)
Application Service (Content)
Closed circuit leasing
SIP connection with voice operators
Hi Wi-Fi အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအား ကမ္ဘာကြီးနှင့် ချိတ်ဆက်ပေး၍ ထို တစ်ယောက်ချင်းစီ၏ ဘဝများအား တိုးတက်စေလိုသည့် စိတ်ဆန္ဒအပြည့်အဝရှိသော အရည်ချင်းရှိ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပါသည်၊ ကောင်းမွန်သော စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၊ ချိတ်ဆက်ရန် Service၊ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း ဖန်တီးခြင်းတို့နှင့် အတူ အများပြည်သူတို့၏ ယုံကြည်မှု ရှိစေခြင်းဖြင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို ကောင်းမွန်သော ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ထားရှိထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ Hi Wi-Fi ၏ အဓိကျသော တစ်ခုတည်းရည်မှန်းချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ Telecom လုပ်ငန်းများတွင် ရှေ့ဆုံးမှ ရပ်တည်၍ ပြည့်ဝစုံလင်ကောင်းမွန်သော နည်းလမ်းများဖြင့် အဖွဲ့အစည်းအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနာဂတ်တစ်ခုအား တည်ဆောက်လိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
MS-2 Tower, Mandalay St., Kan Daw Gyi Housing, Mingalar Taung Nyunt Township Yangon 11221
No.85, Bo Yar Nyunt Street, Dagon Township, Yangon, Myanmar.
Tel: 09 455 3000 77/88/99
Copyright 2018, Hi Broadband. All Rights Reserved.